Chipiri 2 Mbudzi 2021
Muvhuro 1 Mbudzi 2021
Svondo 31 Gumiguru 2021
Kutarisa Kweficha Tritime, Fortime, Timegrid, Timinus, Timechart, Timenine dzakateedzana yewodhi application yakarongerwa zvakasarudzika ini ndiri Yekutarisa mudziyo. Mapurogiramu ari apakutanga, akareruka uye anonakidza mukugadzira, kubva kurudzi rwemangwana kuburikidza nesci-fi maitiro kusvika kudhisheni yedhijitari. Yese mifananidzo yekutarisa inowanikwa mune gumi nemavara - yakakodzera kune ini Ini Tarisa mavara. Ino inguva yakanaka nzira itsva yekuratidzira, kuverenga nekunzwisisa nguva dzedu. www.genuse.eu
Mugovera 30 Gumiguru 2021
Kalendari ZOO ipepa yekugadzira mapepa ekugadzira mhuka nhanhatu, imwe neimwe inoshanda sekarenda yemwedzi miviri. Iva nerakawanda-gore rakazadzwa neako "diki zoo"!
Watchface Muunganidzwa ttmm inopa wachi yekutarisira muunganidzwa, yakagadzirirwa smartwatches neatema uye chena 144 × 168 pixel zviso zvakadai saPebble naKreyos. Iwe uchawana pano gumi nemashanu emhando dzakareruka, dzakanaka uye dzakanaka. Nekuti zvakagadzirwa nesimba rakachena, ivo vakaita semapipi pane zvinhu chaizvo. Aya mawadhi ndiwo ehupfumi uye epasiano-ane hushamwari akambovapo.
China 28 Gumiguru 2021
Magazini Kubva pane iyo pfungwa yekubva uye inosvika iyi magazini yebhodhi yakakamurwa muzvikamu zviviri: Kuenda / Kuuya. Kuenda ndeye maguta european, ruzivo rwekufamba uye matipi ekuenda kunze kwenyika. Inosanganisira pasipoti yemukurumbira mugwaro rega. Pasipoti ye "Republic of Vafambi" ine ruzivo rwevanhu nezve munhu iyeye uye kubvunzana kwavo. Kuuya kune zvese nezve pfungwa yekuti iyo yakanakisa yerwendo kudzokera kumba. Inotaura pamusoro pekushongedza kwemba, kubika, zviitiko zvekuita nemhuri yedu uye zvinyorwa kuti unakirwe nemba yedu zviri nani.
Poise Mwenje Chitatu 19 Ndira
Memento Tsamba Yekuvhura Chipiri 18 Ndira
Exxeo Yakasarudzika Hybrid Piyano Muvhuro 17 Ndira
Khalenda Kalendari Kutarisa Kweficha Kalendari Watchface Muunganidzwa Magazini